हप्ता,, बग नि: शुल्क, र एक सफल सफ्टवेयर रिलिज | Martech Zone
हप्ता,, बग नि: शुल्क, र एक सफल सफ्टवेयर रिलिज
मङ्गलबार, अक्टोबर 9, 2007 बिहीबार, जुन 11, 2009 Douglas Karr
यो हप्ता new हो मेरो नयाँ काममा र यो उत्सव मनाउने हप्ता हो। हाम्रो अनलाइन अर्डरिंग त्यहाँ बाहिर प्रतिस्पर्धा को भीड भन्दा अलग छ र यो चाँडै गर्दै। अर्को हप्ता हामी तलम्पाको लागि उडान गर्दैछौं अर्को रेष्टुरेन्ट फ्रेंचाइजीसँग कुरा गर्न जुन देशको सबभन्दा ठूलो हो।
के यी ग्राहकहरु लाई आकर्षित गर्न सरल छ। हामी रेस्टुरेन्टमा अर्डर प्राप्त गर्दछौं। त्यो यो सबै को बारे मा छ, सही छ? जब तपाईं अनलाइन अर्डर गर्नुहुन्छ, तपाईं उत्पादन प्राप्त गर्न आशा गर्नुहुन्छ - छिटो र सही रूपमा। केहि प्रतिस्पर्धाले आफूलाई फ्ल्याश फ्रन्ट-एन्ड र बेयर-आवश्यक इन्टिग्रेसनको साथ चिन्ता गर्‍यो। जे होस् उनीहरू राम्रा देखिन्थे, उनीहरूले रेस्टुरेन्टमा अर्डर पाइरहेका छैनन्। यदि तपाईं सहि अर्डर प्रदान गर्न सक्नुहुन्न, समयमा, र निश्चय हुनुहोस् कि यसले यो बनाएको हो… त्यसो भए तपाईलाई केवल व्यापारबाट बाहिर जानु पर्छ।
त्यहाँ केही 'फ्लाई-बाय-नाइट' कम्पनीहरू छन् जसले यहाँ र त्यहाँ ग्यारेज समाधान निर्माण गरेका छन्, र त्यहाँ अरू कम्पनिहरू पनि छन् जुनसँग महान विचारहरू छन् तर तिनीहरू केवल वितरण गर्न सक्दैनन् किनकि उनीहरूसँग प्रतिभा वा नेतृत्वको कमी छ। म एक कम्पनीमा सामेल भएँ जुनसँग सब भन्दा उत्तम उत्तम छ। हामीसँग टाढा पुग्ने उद्योग प्रतिभा, अविश्वसनीय आर्किटेक्ट र विकासकर्ताहरू, र सबै सँगै राख्नको लागि सबै जुनसुकै छ।
सुरु गर्दै, संरक्षक प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूमा ठूलो लगानी गर्न केही सचेत निर्णयहरू गरे, एउटा ठोस समाधान, र त्यसपछि तिनीहरूले उद्योगमा काम गर्न थाले। यो भुक्तानी गर्न शुरू गर्दै। हाम्रो पोइन्ट अफ सेल्स एकीकरण पछाडिको आर्किटेक्चर एक मेसेजिंग फ्रेमवर्क हो जुन विश्वको सबैभन्दा ठूलो खुद्रा विक्रेताहरुमा गर्व हुन्छ। केवल हाम्रो कम्पनीको अभाव ट्राफिकलाई निर्देशन दिन एक टेक्नोलोजिस्ट थियो ... त्यहिँ म भित्र आइपुगे।
मलाई लाग्छ मेरो जागिर केटा जस्तै नेस्कारमा फ्ल्यागहरू लहराउँदैछ। म ड्राइभरहरू रेसि। जस्तो न त प्रतिभाशाली हुँ, न मालिकहरू, न त हुडको मुनि के जस्तो आश्चर्यजनक। तर म दौडमा नजर राख्दै छु, जब हामीसँग समस्या भएको छ भने पहेलो झण्डा उठाइरहेको छ, रातो फहराउनुपर्दा हामी रोकिनुपर्नेछ, र जब हामी आफ्नो समयसीमा बनाउँछौं भने चेकर झण्डा फहराउँदैछ। यो एक अविश्वसनीय चुनौती हो तर म यी पेशेवरहरूले घेरिएको ब्लास्ट गर्दैछु! र केटा हामी छिटो बढिरहेका छौं!
पछिल्ला केही हप्ताहरूमा हाम्रा विकासकर्ताहरूले कल सेन्टर ईन्टरप्राइज इन्टिगरेसन पूरा गरे र रिलिज गरे जुन हाम्रो कल सेन्टरले उनीहरूले देखेका सब भन्दा उत्तम बोलाए। योसँग मेरो पहिलो उत्पाद डिजाइन थियो संरक्षक, त्यसैले मलाई वास्तवमै महसुस भयो जस्तो हामीले एउटा घर चलाउन मद्दत गर्नुपर्छ। विकास टोलीले मेरा आवश्यकताहरू लिए र विस्तारहरूको दायरा निर्माण गर्‍यो जुन सबै अपेक्षाहरू भन्दा बढि थियो। यो flawlessly काम गर्दछ र धेरै अन्य प्रयोगको लागि स्केलेबल हो।
स्वीकृति बैठक मैले कहिल्यै भाग लिएको रमाईलो थियो ... त्यहाँ कुनै प्रश्नहरू थिएनन् र यो १० मिनेट लामो भयो। हामीले अनुप्रयोग देखायौं र तिनीहरूले यसलाई स्वीकार गरे। भयो!
हामीले एक राष्ट्रिय रेस्टुरेन्ट उद्योग ग्राहकको लागि पाइलट ईमेल मार्केटिंग कार्यक्रम जारी गर्‍यौं। मलाई सन्देश र ईमेलको डिजाइन दुबै ड्राइभ गर्न कुञ्जीहरू दिइयो। प्रारम्भिक परिणामहरू डबल उद्योग B2B मानक प्रतिक्रिया दरहरू हुन्।
हामीले आज हाम्रो प्रोजेक्ट ब्याकलग पनि लिएका थियौं र एप्लिकेसनमा अन्तिम ज्ञात बग हटाउने कार्य पूरा गर्यौं। हामी अब बृद्धिमा कडा मेहनत गर्दै छौं, पूर्वाधार परिवर्तनहरूका लागि योजनाहरू बनाउनु (उनीहरूको आवश्यक हुनु अघि) र अनुप्रयोगको अर्को संस्करणहरू विकास गर्नु (उनीहरूले अनुरोध गर्नु अघि)। म सबै संसाधनहरूलाई नजीक राख्न र मेरो लागि काम गरिरहेको बहु टीमहरू प्रबन्धन गर्न आफैलाई चुनौती दिइरहेको छु, तर यो आश्चर्यजनक weeks हप्ता भयो!
कसैले मलाई पिन्च!
टैग: eBayLinkedInस्थानीय शपिंग खोजीmiloमिलो फेचलिंकअप सेटअप
ब्लग एक्शन डे २०० Com आउँदैछ!
मैले एउटा भेरिजोन पीपीसी 6700 XNUMX०० पाएँ जुन मैले यो गर्न मनपराएको छु…
अक्टोबर 10, 2007 बिहान 11:54 बजे
बधाई, डग। पढाइले मलाई हंस बम्पहरू दिएको छ!
धन्यवाद जुली! मलाई भाडामा लिएको, मलाई विश्वास गर्ने, र मैले आवश्यक ठानेका परिवर्तनहरू गर्न सशक्त बनाउने संस्था फेला पारेर म साँच्चै धन्य भएको छु। यो सधैं अचम्मको छ कि कर्मचारीहरूले के गर्नेछन् जब तपाइँ तिनीहरूलाई अनुमति दिनुहुन्छ!